Vol। 14 डिसेम्बर, 1911। नम्बर 3
प्रतिलिपि अधिकार, 1911, HW PERCIVAL द्वारा।
बच्चाहरूलाई प्रायः एक पुरानो जोडीको बारेमा परिकथा बताइन्छ जसले आफ्नो धेरैजसो समय चाहनामा खर्च गरे। एक साँझ तिनीहरू आफ्ना फायरसाइडमा बसिरहेका थिए, र, सामान्य रूपमा, यस चीजको लागि वा त्यो इच्छाको लागि, एक परी देखा पर्‍यो र भनिन्, कि उनीहरूले कसरी उनीहरूको इच्छालाई तृप्त पार्न चाहन्थिन् भनेर जानेर उनी केवल तीन चाहनाहरू दिन आएकी थिइन्। उनीहरू खुसी थिए र परीको उदार प्रस्तावलाई परीक्षणमा बसाउन कुनै समय गुमाएनन्, वृद्धले आफ्नो मुटु वा पेटको तत्काल चाहनालाई आवाज दिँदै, काश पुडिंगको तीन यार्ड होस् भन्ने इच्छा गरे; र, यथार्थमा, उहाँको काखमा कालो हलुका तीन गज थिए। ती वृद्ध महिला, केवल यसको चाहनाको लागि केहि प्राप्त गर्ने अवसरको खेर फालिन र बुढेसको अविवेकीपनको नक्कल देखाउँदै क्रोधित भएकी, कालो हलुका उनको नाकमा टाँसिएको चाहन्थे, र यो त्यहाँ अडी रह्यो। त्यो त्यहाँ जारी रहन सक्छ भन्ने डरले ती वृद्धले इच्छा गरे कि यो खस्कियो। र यो गरे। परी हरायो र फिर्ता आएन।
कथा सुनेर केटाकेटीहरू बुढो दम्पतीलाई रिस उठ्छन् र यति ठूलो मौका गुमाउँदा क्रोधित हुन्छन्, जुन आफ्नो पतिसँग वृद्ध महिला थिइन्। हुनसक्छ ती सबै बच्चाहरू जसले कथा सुनेका थिए तिनीहरूले अनुमान लगाए कि यदि उनीहरूसँग यी तीन इच्छाहरू थिए भने के हुन्थ्यो होला।
परीको कथाहरू जुन इच्छासँग गर्नुपर्दछ, र प्रायः मूर्ख चाहनाहरू, प्रायः सबै जातिहरूका लोक कथाहरू हुन्। बच्चाहरू र तिनीहरूका एल्डरहरूले आफैंलाई र तिनीहरूको इच्छाहरूलाई हान्स क्रिश्चियन एन्डरसनको "भाग्यका गोलेश्स" मा प्रतिबिम्बित भएको देख्न सक्छन्।
एउटा परीमा जोडी गोलोशहरू थिए जसको कारण उनीहरूको पहिरन एकैचोटि जुनसुकै समय र स्थानमा लगियो र जुनसुकै परिस्थिति र परिस्थितिमा उसले ईच्छा गरे। मानव जातिलाई अनुमोदन दिनको लागि, परीले अरूलाई बीचमा गोलोसहरू राखिदिए जहाँ ठूलो पार्टी जम्मा भएको थियो र मध्य युगको समय उनीहरूको भन्दा राम्रो थिएन कि थिएन भन्ने सवालमा बहस गर्दै थियो। आफ्नै
घर छोड्दा, मध्ययुगलाई मन पराउने काउन्सिलरले आफ्नै भन्दा फार्चुनको गोलोशेसमा लगाए र उनी ढोकाबाट बाहिर निस्केर आफ्नो तर्कको बारेमा सोच्दै राजा हंसको समयमा आफूलाई खुशी पारे। पछाडि ऊ hundred सय बर्ष लाग्यो र हिंड्दा ऊ हिलोमा स went्यो किनकि ती दिनहरूमा सडकहरू पक्की भइसकेका थिएनन् र पदपथ अज्ञात थिए। पार्षदले भने, यो डरलाग्दो छ, ऊ हिलोमा डुबेको थियो र यसबाहेक बत्तीहरू सबै बाहिर छ। उसले उनलाई उसको घरमा लैजान को लागी एउटा सन्देश ल्याउने कोशिस गर्यो, तर कोही पनि बाँकी थिएन। घरहरू कम थिए र खरानी भए। कुनै पुल अब नदी पार गर्न सकेन। मानिसहरूले नम्रतापूर्वक व्यवहार गरे र अचम्मका लुगा लगाएका थिए। आफूलाई बिरामी सोच्यो ऊ एउटा पौवामा प्रवेश गर्यो। केही विद्वानहरूले उहाँलाई कुराकानीमा संलग्न गरे। उहाँ अज्ञानताको प्रदर्शनमा विचलित र विचलित हुनुभयो, र अरू सबै कुरा उसले देख्यो। यो मेरो जीवनको सबैभन्दा दुखी क्षण हो, उनले टेबलको पछाडि खसे र ढोकाबाट भाग्न खोज्दा भने, तर कम्पनीले उनलाई आफ्नो खुट्टा समात्यो। उसको स .्घर्षमा, गोलेशहरू आइपुगे, र उनी आफूलाई एउटा परिचित सडकमा र ढोकामा भेटिए जहाँ एक चौकीदारले सुतेको थियो। राजा हान्सको समयबाट भाग्नुपर्दा खुसीको साथ, काउन्सलरले एउटा ट्याक्सी ल्यायो र छिटो उसको घरमा लगियो।
नमस्कार, प्रहरीले जागरणमा भने, त्यहाँ एक जोडी गोलेशहरू छन्। तिनीहरू कति राम्रो फिट, उहाँले तिनीहरूलाई मा स्लिप रूपमा, उनले भने। उसले माथिल्लो तलामा बस्ने सेविकाको झ्यालमा हेरे र त्यहाँ ज्योति र कैदीहरू हिँडिरहेको देखे। कस्तो विचित्र संसार हो, प्रहरीले भन्यो। त्यहाँ लेफ्टिनेन्ट यस घण्टामा उसको कोठा माथि र तल हिडिरहेको छ, जब ऊ सुत्ने कोठामा सुत्थ्यो। उसको स्वास्नी वा छोरा छैन। ऊ बाहिर जान्छ र हरेक साँझ रमाउँछ। कस्तो खुसी मान्छे! म इच्छा गर्छु म उहाँ हुँ।
चौकीदार एकैचोटि शरीरमा सारियो र लेफ्टिनेन्टको सोच्यो र उसले झ्यालमा झुकिरहेको भेट्यो र उदास भएर गुलाबी कागजको टुक्रामा हेर्यो जसमा उनले कविता लेखेका थिए। ऊ प्रेममा थियो, तर ऊ गरीब थियो र आफूले माया गरेको मानिसलाई कसरी जित्न सकिन्छ भनेर उसले देखेन। उनले आशै विन्डोको फ्रेमको बिरूद्ध टाउको झुकाए र सिजिए। तल प्रहरीको शरीरमा चन्द्रमा चम्कियो। आह, उनले भने, त्यो मानिस म भन्दा खुशी छ। म जान्दछु कि यो के चाहिन्छ, जान्दैन। उसको एउटा घर र श्रीमती र बच्चाहरु छ उसलाई माया गर्न, र म संग कुनै छैन। के म पाउन सक्छु, र नम्र इच्छा र नम्र आशाको साथ जीवन बिताउन, म म भन्दा खुशी हुनुपर्छ। म चाहन्छु म पहरेदार हुँ।
फर्केर आफ्नै शरीरमा चौकीदार गयो। ओह, त्यो कस्तो कुरूप सपना थियो, उसले भन्यो, र यो लाग्छ कि म लेफ्टिनेन्ट हुँ र मेरी श्रीमती, बच्चाहरू र मेरो घर छैन। मलाई खुशी छ कि म एक प्रहरी हुँ तर ऊ अझै गोलेशमा थियो। उसले आकाशमा हेरे र एउटा तारा झर्दै गरेको देखे। त्यसपछि उसले चन्द्रमामा आश्चर्यजनक आँखाले हेरी।
चन्द्रमा कत्ति अनौंठो ठाउँ हुनुपर्दछ, उनले अलमल्ल गरे। म चाहान्छु कि म सबै अनौंठो ठाउँहरू र चीजहरू त्यहाँ देख्न सक्छु।
एक क्षणमा ऊ ट्रान्सपोर्ट गरियो, तर धेरै ठाउँ देखि बाहिर महसुस भयो। चीजहरू पृथ्वीमा जस्तो थिएन, तर प्राणीहरू अरू कुनै कुरा जस्तो अपरिचित थिए, र उनी सहजै बिरामी थिए। ऊ चन्द्रमामा थियो, तर उनको शरीर पोर्चमा थियो जहाँ उसले छोडेको थियो।
कति घण्टा भयो, प्रहरी? एक जना यात्रीलाई सोधे। तर चौकीदारको हातबाट पाइप खस्यो र उसले केही जवाफ दिएन। मानिसहरू वरपर जम्मा भए, तर तिनीहरूले उहाँलाई जगाउन सकेनन्; यसकारण तिनीहरूले उसलाई अस्पताल लगे, र डाक्टरहरूले उनलाई मृत सोचे। उसलाई गाड्नको लागि तयारी गर्ने क्रममा सब भन्दा पहिले उसको गोलोशहरू हटाउने थियो, र तुरुन्तै चौकीदार ब्यूँझे। यो कस्तो डरलाग्दो रात हो, उनले भने। म यस्तो अनुभव कहिल्यै नगर्न चाहन्छु। र यदि उसले ईच्छा गर्न छाड्यो, सायद ऊ कहिल्यै गर्दैन।
चौकीदार हिंड्न थाल्यो, तर उसले गोलशालाहरू पछाडि छोडिदियो। अब, यो भयो कि एक निश्चित स्वयम्सेवक गार्डको त्यो रात अस्पतालमा उसको घडी थियो, र पानी परिरहेको थियो यद्यपि उनी केही समयको लागि बाहिर जान चाहन्थे। उसले ढोकामा कुमाले आफ्नो बिदाइको बारेमा जान्न चाहेन, त्यसैले उसले फलामको रेलि throughबाट ढुip्गा हाल्ने विचार गर्यो। उसले गोलोशहरू लगाइदियो र रेलहरूमा जान खोज्यो। उनको टाउको धेरै ठूलो थियो। कति दुर्भाग्यपूर्ण, उनले भने। म चाहान्छु कि मेरो टाउको रेलिंगको माध्यमबाट जान सक्छ। र त्यसैले यो भयो, तर त्यसपछि उनको शरीर पछाडि थियो। त्यहाँ ऊ उभियो, उसले खोजे जस्तो उसले गरेको भए, उसले आफ्नो शरीर अर्को पट्टि प्राप्त गर्न सकेन, न त उसको टाउको रेलि through द्वारा। उसलाई थाहा थिएन कि उसले लगाएको गोलोशेषहरू गोल्येश अफ फोर्चुन थिए। ऊ दयनीय अवस्थामा थियो, किनकि यो पहिलेभन्दा कडा वर्षा भयो, र उसले सोचे कि ऊ रेलिंगमा झुण्डिएर पर्खनु पर्छ र धर्मावलम्नी बच्चाहरू र बिहान भोलिपल्ट जाने मानिसहरूले पनि हाँसोमा उडाउनेछ। त्यस्ता विचारहरू दु: ख पाइसकेपछि, र आफूलाई बेकार साबित गर्दै स्वतन्त्र पार्न सबै प्रयासहरू पछि, उसले आफ्नो टाउकोलाई फेरि स्वतन्त्र पार्न खोज्यो; र यो थियो। अरू धेरै इच्छाहरू पछि उसलाई धेरै असुविधा भयो, स्वयम्सेवा फारचून को गोलोशेज बाट छुटकारा भयो।
यी गोलेशहरू पुलिस स्टेशनमा लगिएको थियो, जहाँ उनीहरूलाई आफ्नै लागि गलत गर्दै प्रतिलिपि गर्ने क्लर्कले उनीहरूलाई राखिदिए र बाहिर टहलिए। आफूलाई कवि र लार्कको चाहना पछि, एक कविको विचार र भावनाहरू, र क्षेत्र र बन्धनमा एक लार्कको अनुभूति अनुभव गरे पछि, उसले अन्ततः इच्छा गरे र आफूलाई आफ्नो घरको टेबुलमा भेट्टाए।
तर फार्चुनको सर्वश्रेष्ठ गोलोशेजले ब्रह्मज्ञानको एक जवान विद्यार्थीलाई ल्याए जसले कवि र लर्कको अनुभव पछि बिहान नक्कली क्लर्कको ढोकामा ट्याप गरे।
भित्र आउनुहोस्, नक्कली क्लर्कले भने। शुभ प्रभात, विद्यार्थीले भने। यो एक भव्य बिहान छ, र म बगैंचामा जान चाहान्छु, तर घाँस भिजेको छ। के म तपाईंको गोलोष को उपयोग गर्न सक्छु? पक्कै पनि, प्रतिलिपि गर्ने क्लर्कले भने र विद्यार्थीले उनीहरूलाई लगाए।
उसको बगैंचामा, विद्यार्थीको दृश्य साँघुरो पर्खालले सीमित थियो जुन यसलाई संलग्न थियो। यो एक सुन्दर वसन्त दिन थियो र उसको विचारहरू उसले हेर्न चाहेको देशहरूमा यात्रा गर्न थाले, र ऊ उत्कट स्वरले करायो, ओह, म इच्छा गर्दछु कि म स्विजरल्याण्ड, र इटाली, र यात्रा गर्दै थिए। —— तर उनी अगाडि बढ्न चाहेनन् किनभने उनी एकैचोटि स्विजरल्याण्डको पहाडमा अन्य यात्रुहरूसँग स्टेज कोचमा आफूलाई भेट्टाए। उनी पासोमा परेका थिए र सहजै बिरामी परेका थिए र राहदानी, पैसा र अन्य सम्पत्ति गुमाएको डर थियो र जाडो थियो। यो धेरै असहमत छ, उनले भने। मेरो इच्छा छ कि हामी इटालीको पहाडको अर्को पारमा छौ, जहाँ यो न्यानो छ। र, निश्चित, पर्याप्त थिए।
फूलहरू, रूखहरू, चराचुरु ,्गी, फ़िरोज़ा तालहरू मैदानमा घुम्न, पहाडहरू छेउमा उभिएर टाढासम्म पुग्छ, र सुनौलो सूर्यको किरणले सबैमा महिमाको रूपमा रहेको, एक मनमोहक दृश्य बनायो। तर यो कोच मा धुलो, तातो र आर्द्र थियो। झिंगा र ग्यानाटहरूले सबै यात्रुहरूलाई परास्त गर्थे र तिनीहरूको अनुहारमा ठूलो पसिना बोक्यो। र तिनीहरूको पेट खाली थियो र शरीर थकित। दयनीय र विकृत भिखारीहरूले उनीहरूको बाटोमा घेरा हाले र गरीब र एक्लोपना डाँडामा उनीहरू लागे जुन उनीहरूले रोके। यो अन्य विद्यार्थीहरू निदाएको बेला हेर्दा विद्यार्थीको चिठ्ठामा खस्यो, अन्यथा उनीहरूसँग भएका सबै चीजहरू लुटिए। कीराहरू र गन्धको बावजुद जसले उसलाई क्रोधित गर्थ्यो, विद्यार्थी हल्लाए। यात्रा धेरै राम्रो हुन्छ, उनले भने, "यो कसैको शरीरको लागि नभएको भए हो। जहाँ म जान्छु वा जे पनि गर्न सक्छु, मेरो हृदयमा अझै एक चाहाना छ। यो शरीर हुनुपर्दछ जुन मेरो खोजीलाई रोक्दछ। मेरो शरीर आराममा थियो र मेरो दिमाग स्वतन्त्र छ म निःसन्देह एक खुशी लक्ष्य खोज्नु पर्छ। म सबैको खुशीको अन्तको लागि चाहन्छु।
तब ऊ आफैंलाई घरमा भेटियो। पर्दा कोरिएका थिए। उसको कोठाको मध्यभागमा एउटा कफिन उभिरहेको थियो। यसमा ऊ मृत्युको निद्रामा परेको थियो। उनको शरीर आराम थियो र उनको आत्मा उकास्दै थियो।
कोठामा दुई रूपहरू शान्तसँग हिंडिरहेका थिए। तिनीहरू फेरी खुशी थिए जसले अर्काको गोलो फार्च्युन ल्याए, र अर्को परी जो केयर भनिन्छ।
हेर, तपाईको गोलोसले मानिसहरूमा कस्तो खुशी ल्यायो? केयर भने।
यद्यपि उनीहरुले उनीहरुलाई लाभान्वित गरे जो यहाँ थिए, खुशीको परिक्षामा भनिए।
होईन, केयरले भने, ऊ आफैंबाट गयो। उसलाई बोलाइएको थिएन। म उसलाई एउटा पक्ष दिनेछु।
उनले उसको खुट्टाबाट गोलशोहरू हटाइन् र विद्यार्थी ब्यूँझिन र उठिन। The And।।।।।।।।।।।। The the।।।। ​​The the airy airy airy airy the airy airy airy airy the the the airy the ished ished the ished airy ished airy airy airy airy airy airy airy airy airy airy airy ished ished ished ished ished ished ished ished ished van ished airy airy ished ished van ished airy ished ished airy ished ished ished ished ished ished ished van van airy ished।।
यो भाग्यशाली छ कि मान्छेहरूको भाग्यका गोलशेशहरू छैनन्, अन्यथा तिनीहरू आफैंमा बढी दुर्भाग्य ल्याउन सक्छन् तिनीहरूलाई लगाएकोले र उनीहरूको चाहनाहरू हामी बस्ने कानून भन्दा छिटो सन्तुष्ट भएको पाउँदछौं।
जब बच्चाहरू, हाम्रो जीवनको एक ठूलो अंश ईच्छामा पठाइएको थियो। पछिल्लो जीवनमा जब न्याय परिपक्व भएको मानिन्छ, हामी जस्तै पुरानो दम्पती र गोलोशियस धारण गर्नेहरूले, हामीले प्राप्त गरेको र जसको लागि हामीले चाहेको चीजहरूमा, असन्तुष्टि र निराशामा धेरै समय बितायौं, र बेकार पछुतोमा अरु केहि चाहेको छैन।
इच्छालाई सामान्यतया बेवास्ता गरिन्छ भनेर मान्यता दिइन्छ, र धेरैले मान्दछन् कि इच्छाहरू आफूले चाहेको कुरालाई पछ्याउँदैनन् र तिनीहरूको जीवनमा थोरै प्रभाव पार्दछन्। तर यी गलत धारणा छन्। ईच्छाले हाम्रो जीवनलाई असर गर्छ र यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले जान्नु पर्दछ कि कसरी इच्छुक प्रभावहरू र हाम्रो जीवनमा केहि प्रभावहरू ल्याउँदछ। केहि मानिसहरु अरु भन्दा आफ्नो इच्छाहरु को लागी बढी प्रभावित छ। अर्को व्यक्तिको चाहनाबाट एक व्यक्तिको इच्छाको परिणाममा भिन्नता नपुंसकता वा उसको विचारको सूक्ष्म शक्ति, उसको इच्छाको मात्रा र गुणमा, र विगतको मनसाय र विचार र कार्यहरूको पृष्ठभूमिमा निर्भर गर्दछ जुन उनको इतिहास बनाउनुहोस्।
चाहना दिमाग र इच्छाको बिचको चाहानाको कुनै वस्तुको वरिपरि विचारको खेल हो। एक इच्छा व्यक्त हृदयको इच्छा हो। इच्छा गर्नु छनौट र चयन गर्नु भन्दा फरक छ। कुनै वस्तुको छनौट र छनौट गर्न यसको बीचको बिचार र केहि बिचको तुलना गर्न आवश्यक हुन्छ, र छनौटको परिणामले चीजको तुलनामा अन्य चीजहरूको प्राथमिकतामा छानिएको हुन्छ जुन यो तुलना गरिएको छ। ईच्छामा, चाहनाले सोचाइलाई केहि वस्तुसँग सोच्न प्रेरित गर्दछ जुन अरूलाई केहिसँग तुलना नगरीकन यसको क्रुर हुन्छ। अभिव्यक्त इच्छा उस वस्तुको लागि हो जुन इच्छाबाट तृप्त हुन्छ। एउटा इच्छाले यसको बल प्राप्त गर्दछ र इच्छाबाट जन्मेको हुन्छ, तर विचारले यसलाई रूप दिन्छ।
जसले बोल्नु अघि नै आफ्नो सोच्ने गर्छ, र जसले केवल सोचविचार पछि बोल्छ उसले सोच्न अगाडि बोल्ने र जसको बोली उसको आवेगको अभिव्यक्ति हो बोलेको जस्तो इच्छा गर्ने जस्तो हुँदैन। वास्तवमा, जो अनुभवमा पाको छ र जसले आफ्नो अनुभवबाट फाइदा लिएको छ उसले एकदम थोरै कामना गरेको छ। जीवनको स्कूलमा सूचनाहरू, खोज्न धेरै रमाईलो लाग्छ। धेरैको जीवनहरू इच्छुकताका प्रक्रियाहरू हुन्, र तिनीहरूको जीवनमा ल्याण्डमार्कहरू, जस्तै भाग्य, परिवार, साथीहरू, ठाउँ, स्थिति, परिस्थिति र सर्तहरू, रूपहरू हुन् र क्रमशः चरणहरूमा घटनाहरू हुन् जुन उनीहरूको इच्छाको परिणाम हो।
शुभकामना सबै चीजहरूसँग सम्बन्धित छ जुन आकर्षक देखिन्छ, जस्तै कुनै दाग लागेको कुराबाट छुटकारा पाउने, वा डिम्पलको अधिग्रहण गर्ने, वा विशाल सम्पत्ती र सम्पत्तीको मालिक हुन, वा सार्वजनिक आँखाको अगाडि स्पष्ट भाग खेल्न, र यी सबै कुनै कार्यको निश्चित योजना बिना नै। साधारण चाहनाहरू भनेको ती हुन् जुन आफ्नै शरीर र यसको भोकसँग सम्बन्धित छ, जस्तै खानाको केही लेखको चाहना, वा केहि चाखलाग्दो प्राप्ति, औंठी, गहना, फरको एक टुक्रा, लुगा, कोट, कामुक सन्तुष्टि प्राप्त गर्न, एक अटोमोबाइल, डु a्गा, एउटा घर; र यी चाहनाहरू अरूमा विस्तार हुन्छन्, जस्तै प्रेम गर्ने इच्छा, ईर्ष्या गर्ने, सम्मान हुने, प्रसिद्ध हुन, र अरूमाथि सांसारिक श्रेष्ठता प्राप्त गर्ने। तर जहिले पनि कुनै व्यक्तिले आफूले चाहेको कुरा पाउँदछ, उसले भेट्टाउँदछ कि त्यो कुराले उसलाई पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुँदैन र ऊ अरू कुराको लागि चाहन्छ।
जो सांसारिक र शारीरिक इच्छा संग केही अनुभव भएको छ र तिनीहरूलाई प्राप्त गर्दा पनि स्पष्ट र अविश्वसनीय हुन को लागी, समशीतोष्ण हुन, आत्म संयम हुन, सद्गुण र ज्ञानी हुन को लागी। जब कुनै व्यक्तिको इच्छा यस्ता विषयहरूमा फर्कन्छ, उसले इच्छा गर्न छोड्छ र सद्गुण विकास र बुद्धि ल्याउनेछ भन्ने कुरा गरेर उसले यी प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दछ।
अर्को प्रकारको चाहना भनेको त्यो हो जुन आफ्नै व्यक्तित्वसँग सम्बन्धित छैन तर अरूसँग सम्बन्धित छ, जस्तै अरुको स्वास्थ्य, वा भाग्य, वा केही व्यवसाय उद्यममा सफल होस् भन्ने चाहना, वा उसले आत्म-नियन्त्रण प्राप्त गर्नेछ र आफ्नो प्रकृति अनुशासन र आफ्नो दिमाग विकास गर्न सक्षम।
यी सबै प्रकारका इच्छाहरूका उनीहरूको विशेष प्रभावहरू र प्रभावहरू छन्, जुन इच्छाको मात्रा र गुण, उसको दिमागको गुणस्तर र शक्तिबाट निर्धारण गरिन्छ, र यी शक्तिहरूलाई उसको विगतका विचारहरू र कार्यहरूद्वारा दिइन्छ जुन उसको वर्तमान इच्छालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। भविष्य
ईच्छाको एक ढीला वा बचकाना तरीका छ, र एक विधि जुन बढी परिपक्व हुन्छ र कहिलेकाँही वैज्ञानिक पनि भनिन्छ। छाडा तरिका भनेको उसको मनमा डुब्ने र आफ्नो काल्पनिक प्रहारको कुराको लागि इच्छा गर्नु हो, वा जुन कुरा आफ्नै विचारहरू र चाहनाहरूले सोच्दछ। ऊ कार, एउटा याट, दस लाख डलर, भव्य शहर-घर, देशको ठूलो सम्पत्ति, र सगरको बक्सको लागि चाहेको उही सजिलोसँग चाहान्छ, र उसको साथी टम जोन्सले उसलाई एउटा पैसा तिर्नेछ। त्यो साँझको भ्रमण गर्नुहोस्। उसको इच्छाको लुगा वा बचकाना तरिकाको बारे कुनै निश्चितता छैन। जो यसमा लिप्त छ अरु कुनै चीजको लागि कुनै एउटा चीजको लागि चाहानुहुन्छ। ऊ आफ्नो अपरेशनमा सोचाई वा विधिको निरपेक्षता बिना अर्कोबाट उफ्रिन्छ।
कहिलेकाहिँ छाडा बुद्धिले गम्भिर शून्यतामा हेर्छ, र त्यो मैदानबाट उसको महलको निर्माणको लागि इच्छा गर्न र देख्न थाल्छ, र त्यसपछि अचानक उसको जीवनको अर्कै प्रकारको चाहना हुन्छ जुन एक बन्दरले आफ्नो पुच्छरमा झुण्डिरहेको बेला, झुम्काएको थियो। ब्राउज र बुद्धिमान देखिने, त्यसपछि अर्को अंग मा उफ्रिन्छ र बकबक गर्न को लागी शुरू गर्दछ। यस किसिमको चाहाना आधा सचेत तरीकामा गरिन्छ।
एक जसले आफ्नो इच्छा अनुसार विधि लागू गर्न कोशिस गर्छ, आफूलाई के चाहिन्छ र के गर्न चाहन्छ भन्ने बारे पूर्ण सजग र सचेत हुन्छ यस छाडा बुद्धिमतीको साथ, उसको चाहना आफूले चाहेको कुराबाट सुरु हुन सक्छ। तर उहाँसँगै यसको अस्पष्टताबाट निश्चित इच्छामा बढ्नेछ। तब उसले यसको लागि भोकाउनेछ, र उसको चाहना स्थिर तृष्णा र तीव्र इच्छामा स्थिर हुनेछ र आफ्नो इच्छाको पूर्तिको लागि दृढ अडानमा परिणत हुनेछ, जुन विधार्थी विद्वानहरूको केही स्कूलले ढिलो भनिएको थियो। ध्यानाकर्षण को। ”एक विधि संग बुद्धिमानी सामान्यतया नयाँ सोच योजना अनुसार अगाडि बढ्छ, जुन हो, आफ्नो इच्छा बताउन र माग्ने र मानेको र उसको समृद्धि को कानून को मांग को मांग। उहाँको बिन्ती ब्रह्माण्डमा सबैका लागि सबै कुराको प्रशस्तता रहेको छ र आफ्नो इच्छाको जुन भागको लागि उसले अहिले दाबी गरेको छ त्यसबाट बोलाउनु उसको अधिकार हो।
आफ्नो अधिकारको दाबी गरिसकेपछि र उहाँ आफ्नो ईच्छाको साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ भनेर दावी गर्नुभयो। यो उसले आफ्नो इच्छाको तृप्तिको लागि स्थिर भोकाएको र तृष्णा गरेर, र आफ्नो चाहना र सोचाइलाई निरन्तरता दिएर प्रशस्त विश्वव्यापी आपूर्तिको लागि निश्चित गर्यो, जबसम्म उसको चाहनाको बलात्कार शून्य केही हदसम्म पूरा हुँदैन। नयाँ सोच विचार विधि अनुसार विवेकीको इच्छा कहिले पनि मिल्दैन, यद्यपि उसले आफूले चाहेको कुरा मात्र पाउन सक्छ र जुन मार्गको लागि उसले चाहेको हो। वास्तवमा भन्ने हो भने यसले प्रायः धेरै दु: ख निम्त्याउँछ, र ऊ चाहान्छ कि उसले इच्छा नगरीकन, विपत्ति भोग्नु भन्दा जुन यस इच्छाको प्राप्तिले समेटिएको थियो।
जान्ने दाबी गर्नेहरू जो कानूनको बारेमा अनजान छन् तिनीहरूबाट लगातार ईच्छा गर्ने मूर्खताको एउटा उदाहरण निम्न हो:
अज्ञानीहरूको चाहनाको व्यर्थताको बारेमा र माग र चाहना गर्ने ती नयाँ तरिकाहरू बिरूद्ध धेरै नयाँ कल्टहरूले समर्थन गरेको कुराको बारेमा कुरा गर्दै, चासो दिएर सुनेका एक व्यक्तिले यसो भने: “म वक्तासँग सहमत छैन। मँ विश्वास गर्दछु कि मसंग जे इच्छा छ मँ गर्न अधिकार छ। म केवल दुई हजार डलर चाहन्छु, र म विश्वास गर्दछु यदि मैले यसको लागि ईच्छा गरिरहें भने म यो पाउनेछु। "" महोदया, "पहिलोले जवाफ दियो," कसैले पनि तिमीलाई ईच्छा गर्नबाट रोक्न सक्दैन, तर हतार गर्नुहुन्न। धेरैले आफ्नो चाहनाको लागि आफूले चाहेको माध्यम पाएकोमा उनीहरूको पछुतो मानेको छ। "उनले भने," म तपाईको धारणामा छैन। " “म धनीताको नियममा विश्वास गर्दछु। म अरूलाई चिन्छु जसले यस कानूनको लागि माग गरेका छन्, र ब्रह्माण्डको प्रशस्तताबाट तिनीहरूको चाहनाहरू पूरा भएको थियो। मलाई मतलब छैन कि यो कसरी आयो, तर म दुई हजार डलर चाहन्छु। यसको लागि ईच्छा गरेर र यो माग गरेर, म विश्वस्त छु कि म यसलाई प्राप्त गर्नेछु। "केही महिना पछि उनी फर्किए, र उनको हेरचाह गरिएको अनुहार देखेर, जसलाई उसले भनेको थियोः" मैडम, के तिमी आफ्नो चाहना पायौ? "" मैले गरे, ”उनले भनिन्। “अनि तिमी खुशी छौ?” उसले सोध्यो। "होईन," उनले भनिन्। “तर अब मलाई थाहा भयो कि मेरो इच्छा मूर्खतापूर्ण थियो।” “त्यसो कसरी?” उनले प्रश्न गरे। "ठीक छ," उनले भनिन्। “मेरो श्रीमान्को दुई हजार डलरको जीवनमा बिमा थियो। यो उनको बिमा हो जुन मैले प्राप्त गरें। ”
(जनवरी को द वर्डको अंकमा निष्कर्ष निकाल्नु।)